Ahoana ny fanamboarana ny angona aseho rehefa mamorona fifandraisana vaovao | Avy amin'ny mac aho
Rehefa mamorona fifandraisana vaovao isika, amin'ny ankabeazan'ny tranga dia mameno ny nomeraon-telefaona fotsiny isika, ary mamela ny mailaka. Izany dia satria amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mijanona tsy mampiasa mailaka amin'ny alàlan'ny WhatsApp ireo mpampiasa Azontsika atao ny mihevitra azy io ho ara-dalàna raha toa ka tsy matihanina ilay baiko hitahirizana ny fifandraisana.
Raha mifantoka amin'ny fampiasana matihanina ny fandaharam-potoanan'ny Mac antsika, dia azo inoana fa fa ankoatry ny nomeraon-telefaona dia mila manampy data fanampiny koa isika, ankoatry ny mailaka. Rehefa te-hanampy fifandraisana vaovao amin'ny kalandrie izahay dia asehon'ny macOS aminay amin'ny fomba tsy miangatra ireo saha efa voatendry, ireo izay mahazatra kokoa.
Soa ihany, macOS, tsy toy ny iOS, mamela antsika hanova izay saha tianay haseho isaky ny te-hanampy fifandraisana vaovao amin'ny fandaharam-potoananay izahay, mba tsy hihozongozona rehefa mila manampy saha izay tsy hita ao amin'ny fisie famoronana fifandraisana.
Manampia saha vaovao rehefa mamorona fifandraisana vaovao
Raha vantany vao nosokafantsika ny rohy fifandraisana dia tsy maintsy mandeha any amin'ny safidinao izany fampiharana izany amin'ny alàlan'ny bara fisakafoana ambony, kitiho ny Contacts sy Prefers.
Avy eo dia mankany amin'ny vakizoro isika iombonana. Ity takelaka ity dia mampiseho ireo saha misy anao rehetra izay miseho rehefa te-hanampy fifandraisana vaovao amin'ny fandaharam-potoananay izahay.
Raha te hamafa isika Ny sasany amin'ireo aseho dia tsy mila manindry fotsiny ny marika voarara hanafenana azy isika.
Raha te hanampy izahay sehatra vaovao, tsy maintsy tsindrio ny drop-down izay aseho eo amin'ny ilany havia ambony amin'ny fikandrana ary tsindrio ilay tianao ampiana.
Raha efa misy ny saha fa te hanampy iray vaovao izahay, tsy maintsy manindry ny mari-pamantarana miampy eo alohany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Fomba fanamboarana ny angona aseho rehefa mamorona fifandraisana vaovao
Tim Cook dia manamafy mpampiasa maherin'ny 50 tapitrisa ao amin'ny Apple Music